I-China 2021 yokufika kwamanenekazi amaqhekeza ama-2 ama-bikini swimsuit swimsuit manufacturers kunye nabathengisi | Amanzi eTspring
Ikhonkco: UShelly Wang
Inxalenye enye yokuqubha
I-Bikini 2 Piece Swimwear
Abantwana Iimpahla zokudada
Qubha umnqwazi kunye neAccesorry
Ukunxiba umntwana osisi
Iintombazana ezimbini ...
Ikhathuni ethambileyo neyolulekayo ...
Ilaphu Stringable chil ethambileyo ...
I-2021 yokufika kwabafazi abatsha iziqwenga ezi-2 zeebikini zokudada
Umbala: ngokwe okanye kunokuba kuyilo lwabathengi
Ixabiso FOB: I-US $ 5 -29.99 / isiqwenga
Min.Order Ubungakanani: 3 Piece / Pieces
intlawulo yesampula: $ 30 / iseti
Ukuhambisa ngenqanawe : ukuvakalisa, ukuthuthwa kolwandle, ukuthuthwa komoya
ixesha lokukhokhela : Iintsuku 7-15 ukuba ikhona, okanye yokuxoxwa
Indawo yokuQala: I-Fujian, China
Igama lebrand: Akukho nanye
Inombolo yomzekelo: Zc2865
Iqela lobudala: Abantu abadala
Phawu: Unokuphefumla, uzinze, UKUYEKA UKUKHULA, UKUSETYENZISWA KAKHULU, UKUSETYENZISWA KWAKHONA, UKUQHUBEKA NENDLELA
Uhlobo loBonelelo: Izinto ze-Stock
Ubungakanani obufumanekayo: 1000
Izinto: Iipesenti ezingama-78 zeNylon
Uhlobo: Iiseti Ibhikini
Uhlobo lohlobo: Imigca
Iintsuku 7 isampula ukuze ixesha phambili: Inkxaso
Umbala: Imibala emi-3
Ilogo: Elungiselelweyo Ilogo Yoshicilelo
Umsebenzi: Ukufuma Wicking
Uyilo: Uyilo lwe-OEM kunye ne-ODM
Ilaphu: Iipesenti ezingama-78 zeNylon
Intlawulo: T / T, iPaypal
I-Tspringwater Co., Ltd. ibekwe kwisiXeko saseQuanzhu, kwiPhondo laseFujian, eyifashoni yobugcisa enxibe iimpahla
umenzi nelithumela, kwaye ngaphezu kweminyaka eli-10. Uyilo, uphuhliso, ukufumana kunye nokuvelisa,
Iimfuno zentengiso kwihlabathi liphela, njengamazwe e-EU, i-USA, Canada, Australia kunye ne-Asiya.
SIYAMUKELA iimpahla zesitokhwe zesiko le-OEM ngaphandle kwe-MOQ.
Izinto eziluncedo kuthi
1.Singumvelisi eFujian, China
2.Sibonelele ngenkonzo ye-OEM kubathengi kangangeminyaka
3. Ngaphambi kokuveliswa kwemveliso eninzi, isampulu inokubonelelwa ukujonga umgangatho
4.Small MOQ kwinkampani amancinci amatsha.
5.Umyili onamava wokunika iingcebiso zobungcali ukunceda ekwenzeni uyilo lwakho
6.Most umthengisi wesigulana ukukusebenzela.
Umzekelo wesampula ekuvunyelweni kwiWechat:
1.Ndingayifumana njani isampulu yokuqubha yokuqinisekisa umgangatho?
1. Nceda unike ukwakheka ngokuchanekileyo, ulwakhiwo, uxinano, ububanzi kunye nokugqitywa kwelaphu kunye noyilo kunye nemilinganiselo yeempahla zangaphandle kuthi. Iinkcukacha zezincedisi, sinako ngokweenkcukacha zakho ukukunika isampulu.
Ungasithumela isampulu, sinako ngokwesampulu yakho ukuba sikunike isampulu yekhawuntara.
2.What yintoni MOQ yakho?
Ngokwesiqhelo MOQ ziikhompyuter / iiseti ezingama-50, ubungakanani obungadluli ku-3. Ngaphantsi kwama-50, ixabiso leyunithi liya kuba phezulu.
3.Ulungiselela njani intlawulo?
A: Samkela i-Paypal, i-Alibaba Assurance Trade, i-TT. I-Western Union Ngokuqhelekileyo i-30% idiphozithi, i-70% ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa. Nawuphi na umbuzo, pls uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha ngolwazi oluthe kratya.
Egqithileyo I-2020 yabasetyhini iGym Suit Sport Bra Tops Yoga Leggings Seta iilebheli zabucala zeYoga Setha iYoga Zc2865
Okulandelayo: I-Bikini 2 Piece Swimwear
Q1. Ndingasifumana njani isampulu yoyilo lwamakhwenkwe kunye namantombazana Swimsuit yokuqinisekisa umgangatho?
A: 1. Nceda unike ukwakheka ngokuchanekileyo, ulwakhiwo, uxinano, ububanzi kunye nokugqitywa kwelaphu kunye noyilo kunye nemilinganiselo yeempahla zangaphandle kuthi. Iinkcukacha zezincedisi, sinako ngokweenkcukacha zakho ukukunika isampulu.
Umbuzo Ndingalifumana njani ixabiso loyilo lokudibanisa inkwenkwe kunye nentombazana?
A: 1. Nceda unike ukwakheka ngokuchanekileyo, ulwakhiwo, uxinano, ububanzi kunye nokugqitywa kwelaphu kunye noyilo kunye nomlinganiso weSwimsuit kuthi. Sinako ngokwemiqathango yakho ukukunika isampuli kunye nexabiso.
2.Ungasithumela isampulu, sinako ngokwesampulu yakho ukuba sikunike isampulu yekhawuntari kunye nexabiso.
3. Ukuba awuzazi iinkcukacha zelaphu, Ungasinika imifanekiso yelaphu, kunye nokusetyenziswa, sinako ngokwamava ethu ukukunika ixabiso eliqikelelweyo.Kodwa kanye ixabiso kufuneka emva kokuba siqwalasele isampulu yakho yoqobo.
Umbuzo. Andilazi ulwazi lweSwimsuit, ndingathini uku-odola oku kuwe?
A: Kuyilo lwamakhwenkwe kunye namantombazana Swimsuit, Yeyona ndlela ilungileyo ukuba ungasithumela isampulu, ukuze sikwazi ukukunika isampulu yekhawuntara yokujonga umgangatho, kwaye siya kucaphula ixabiso ukuze ujonge indleko. Emva kokuqinisekisa konke oku. Unokuqhagamshelana nentengiso yethu ngomyalelo.
Umbuzo Ndiyivenkile encinci, uyamkela iodolo encinci?
A: Akukho ngxaki ukuba uyivenkile encinci, singathanda ukukhula kunye nawe.
Umbuzo 5. Mna umyili, Ungandinceda ukuvelisa isampuli leyo sayila?
A: Injongo yethu kukunceda abathengi ukuba baphumelele. Ke yamkelekile ukuba sinokukunceda ukusombulula ingxaki kwaye uyilo lwakho luzaliseke.
Ngaba unokwenza inkonzo ye-OEM okanye i-ODM?
A: Ewe. Singayamkela inkonzo ye-OEM yoyilo lwamakhwenkwe kunye namantombazana ibhatyi & Coat. Kwakhona sineqela lethu loyilo. Ke kuyamkeleka ukuba ukhethe iimveliso zethu ze-ODM.
Umbuzo 7. Ngaba unayo imigaqo-nkqubo ekhethekileyo yenkampani yeBrand?
A: Ewe, sinenkxaso ekhethekileyo yenkampani enegama layo kodwa nakuluhlu lwabathengi be-VIP. Nceda usithumelele idatha yakho yokuthengisa yonyaka ophelileyo. Ke siyayibona indlela yokuxhasa iimveliso zakho kwintengiso yakho.
Q8. Ngaba unokwenza inkonzo yendlu ngendlu? Kuba andazi ukuba ndenza njani ukucoca amasiko.
A: Ewe. Sinokwenza inkonzo yendlu ngendlu ukukunceda ugcine ixesha elininzi lokuhambisa. Kananjalo sinezaphulelo ezinkulu kwinkampani yokuhambisa kuba senza okuninzi mihla le. Ke iya konga ixesha lakho kunye nemali.
Umbuzo 9. Kude kube nini ukufumana isampuli?
A: Ngokwesiqhelo malunga neentsuku ezili-10 ukuya ku-15 zilungisiwe. Kananjalo kuya kufuneka intlawulo yesampulu, kodwa ukuba uya-odola isiseko esisisambuku kwiisampulu, inokuphinda iphinde isetyenziswe.
Umbuzo10. Uyilungiselela njani intlawulo?
A: Samkela i-Paypal, i-Alibaba Assurance Trade, i-TT
Ngokwesiqhelo i-30% yedipozithi, i-70% eseleyo ngaphambi kokuthunyelwa.
Nawuphi na umbuzo, pls uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile.
Umbuzo Uthini uluhlu lwakho lwemveliso
A: Naluphi na uhlobo lwezinto zokudada, njengebhikini, iibhulukhwe ezimfutshane zebhayisekile, iyunifomu yokuhamba ngebhayisikile, oonogada abangxamile, ii-leggings kunye neYoga, i-sunhat, iigogs.
Naluphi na uhlobo lweempahla zabantwana: njengempahla yomntwana, iiseti eziphezulu. Iibhayibhile, iiSweaters.
Naluphi na uhlobo lwebhegi: Ubhaka, ibhegi yokutya, ibhegi yesikolo.
Naziphi na iintlobo zangaphantsi: Amadoda iimpahla zangaphantsi, Abafazi uBra, njl.
I-Q12: Kuthekani ngesiqinisekiso senkampani yakho?
Impendulo: Yintoni oyifunayo siza kusebenzisana nayo kwaye sikunike, umzekelo i-SGS.
Iinqanawa zokuqubha zikaMama
Ukuhamba ngeBikini yokuDada
Abafazi abashushu beFashoni yamaLady Ladies Swimwear Australia ...
I-Bikini 2 Piece Swimwear Ladies Swimwear Australia
Ladies Swimwear Australia Piece ezimbini Ukuhlamba Su ...
Abafazi abaShushu iFashoni yeFashoni eMdaka yesiQinisekiso seBhafu yokuhlamba ...
Abafazi abaDadayo abaShushu.
Yenza ezona mveliso zemidlalo zidumileyo emhlabeni
I-Tspringwater Co., Ltd. ibekwe kwisiXeko saseQuanzhu, kwiPhondo laseFujian, eliyifashoni yobuchwephesha bokuvelisa iimpahla kunye nokuthumela ngaphandle, kwaye ngaphezulu kweminyaka eli-10. Uyilo, uphuhliso, ukufumana kunye nokuvelisa, iimfuno zorhwebo kwihlabathi liphela, njengamazwe e-EU, i-USA, Canada, Australia kunye ne-Asiya. SIYAMUKELA iimpahla zesitokhwe zesiko le-OEM ngaphandle kwe-MOQ.
Umphathi wentengiso wamanye amazwe: uShelly Wang